Gnome 3.8 ရှိ Gnome Fallback (Classic Mode) သို့နှုတ်ဆက်သည် Linux မှ
Gnome 3.8 ရှိ Gnome Fallback (Classic Mode) သို့နှုတ်ဆက်သည်
အစောပိုင်းဗားရှင်းများတွင်အသုံးပြုသူများစွာသိသည် GNOME shell ကို, graphically accelerated PCs မရှိသောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ virtual machine များပေါ်တွင်လည်းမရှိနိုင်ပါ။
ဒီအဘို့, ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် Gnome အမှားကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ဆင်တူတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုပေးသော GNOME 2၏, ဒါပေမယ့်ပုံ၏ developer များ Gnome ဒီ option ကသူတို့ကိုနှောင့်ယှက်။ သင်အသုံးပြုရမည် GNOME shell ကို ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီ Gnome အမှား ဝေး၏ရူပါရုံကိုကနေရွေ့သွားသည် GNOME 3.
llvmpipe မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မပါသောကွန်ပျူတာများလည်ပတ်နိုင်သည် Gnome-Shell ကို, နှင့်အဘယ်ကြောင့် mode ကိုဖြစ်ပါတယ် Fallback သို့မဟုတ်ဂန္ထဝင် Gnome တချို့သိကြသကဲ့သို့ကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ် GNOME 3.8။ သူတို့ကဒီနည်းပညာကိုအားကိုးတယ်၊ (သို့မဟုတ်ကောင်းမွန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ) တူဗိသုကာ၌တည်၏ ppc, s390, လက်မောင်း နှင့်အခြား Non-Linux ကိုစနစ်များပေါ်တွင် (ဥပမာ OpenBSD ကိုချခြင်း)
ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ကိုကြည့်ရှုပါစေ ဒီ link ကိုသူတို့ "အခြားအကြောင်းပြချက်" အဖြစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ဘယ်မှာ fallback mode ကို ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများမလုပ်ရသေးပါ။ သတိပေးချက်များကဲ့သို့သော၎င်း၏ပထမဆုံးမူကွဲများမှ စတင်၍ ပြသမှုအမှားများပေါ်လာသည်။ ဒါ့အပြင်ဘယ်သူ့ကိုမှအဲဒါကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်မထားပါဘူး ဒိန်ခဲ o Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ GL မပါဘဲစနစ်တကျအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်
ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူလုပ်မှာလဲ။ ဂန္တ ၀ င်ပုံစံကို သုံး၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်ယောက်ျားများသည် Gnome မှ extension တစ်ခုစီးရီးကို enable ပါလိမ့်မယ် GNOME shell ကို အလားတူအတွေ့အကြုံကိုသိရှိစေရန်။
သူတို့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါ Gnome အမှား, အနည်းငယ် module တွေထိခိုက်လိမ့်မည်:
ဤအရာအားလုံးသည် shit ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသူတို့သိထားသဖြင့်အခြား Desktop Environments ကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်အကြံပေးလိုကြသည် Xfce o အိမ်ထောင်ဖက်..
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်သူတို့သည်တိုးတက်ရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုရည်စူးရန်အချိန်သို့မဟုတ်ဆန္ဒမရှိပါ Gnome အမှား ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုလား။ ဒါကိုအချိန်တန်ပါပြီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Gnome 3.8 ရှိ Gnome Fallback (Classic Mode) သို့နှုတ်ဆက်သည်
66 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်း။ သငျသညျ gnome-shell ကိုတိုးတက်စေချင်လျှင်သင်ဂန္ဘေးဖယ်ထားရန်ရှိသည်
ကောင်းပြီ၊ မထင်ဘူး၊ gnome2သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ဗားရှင်း ၃ မှရရှိသောချဉ်းကပ်နည်းသည်အစည်းအဝေးအချက်များထက်အမှားအယွင်းများပိုများသည်၊ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသင့်သည့်အတော်လေးသိသိသာသာတိုးတက်သောတိုးတက်မှု
မင်းအကြောင်းကိုမင်းမသိဘူးဒါပေမယ့်နောက်ကျတာကတော့ Gnu / linux ရှိ desktop environment များလောကမှာနည်းနည်းလေးရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
သင် Ubuntu နှင့်၎င်း၏ Unity ကိုကြည့်ပြီးသင်နှင့်ဘာမျှမလုပ်နိုင်ဟုထင်ပြီးအားလုံး (နှင့်နည်းနည်း) ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသည်တတိယပါတီများကလုပ်ဆောင်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာက၎င်း၏ interface ကိုအချို့သောအမြင်အာရုံနှစ်သက်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအခါသင်သည်သင်အသုံးပြုသည် KDE စဉ်းစားခြင်းနှင့် wow ဟုပြောသည် ငါအရာအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါဟာစူပါစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပေမယ့် gnk အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ application တွေကို run ဖို့ gtk နဲ့တွဲဖက်တဲ့စာကြည့်တိုက်တစ်ထောင်နှင့်စာတွဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလက်ချင်းချိတ်နေတယ်။ သင်ကငါတောင်ပံကိုတင်! ငါ chakra ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ အရာအားလုံးမြန်တယ်၊ ချောချောမွေ့မွေ့ (kde ထဲမှာ "ရှားပါး" တစ်ခုခု [အမြဲတမ်းမဟုတ်၊ မီးလျှံစစ်မဟုတ်ပါ]) သို့သော် gnome အတွက်ရေးသားထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသင် install လုပ်ရန်သင်ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က Bundle ထဲမှာမရှိဘူး၊ နောက်သူတို့ CCR ထဲမှာမရှိဘူး။ သင် AUR မှာအဆုံးသတ်သွားမယ်။ package names တွေကမကိုက်ညီတဲ့အတွက် (သူတို့တည်ရှိပြီးဖြစ်ပေမယ့် aur-ccr ဆက်နွယ်မှု) ဘာလို့လဲဆိုတော့မှီခိုမှုတွေပျက်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့က 32-bit support ကိုယူပြီးမင်းခြေထောက်ကြားမှာအမြီးနဲ့ပြေးသွားတယ်။
နောက်တော့ lxde ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ vah ကအရမ်းလွန်းတယ်၊ သိပ်မစားဘူး၊ ဒါပေမယ့်တော်တော်လေးမကြည့်ဘူး။
သင် xfce ကိုစမ်းကြည့်ပြီး ummm စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊ gnome နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသော်လည်း၎င်းသည် gtk2 ကိုနှေးကွေးစေပြီးအချို့ application များသည်မှန်ကန်စွာမကြည့်နိုင်ပါ။
gnome-shell မှပြောတာက၊ ငါဟာမင်းရဲ့စကားဝှက်ကိုတောင်းတဲ့အခါ၊ သတိပေးချက်တွေဆီကသတင်းစကားတွေကိုတုန့်ပြန်တာ၊ virtual desktops တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ dynamic နည်းလမ်းစတာတွေအတွက်ငါကြိုက်တယ်လို့ပြောပေမယ့် "capping" နဲ့ extensions ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းဖော်ပြပေးတယ်။ ၎င်းသည်အသစ်ပြန်လည်မွမ်းမံထားသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းများနှင့်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော patch တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါဟာတကယ်တော့မေမေရေလိုမျိုးမူလတန်း OS ကနေ Phanteon ကိုတကယ်မျှော်လင့်နေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုနဲ့မသက်ဆိုင်လို့ပါ။ သူတို့ဟာမကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး၊ သူတို့မှာအလုပ်တွေအများကြီးမရှိတာတောင်မှနောက်ကွယ်မှာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးကမ္ဘာ -gnu / linux- ၏ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ) အမြင်။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏ခေတ်နောက်ကျနေသော wXP ကိုနာကျင်စွာစောင့်ဆိုင်းပါမည်
PS: ငါ linuxmint ကိုမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအဲဒါကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ အဲဒါကမှန်ကန်တဲ့ gnome-shell ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့တူတယ်။
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါအပြည့်အဝသဘောတူတယ် ငါ ElementaryOS ၏နေ့စဉ်တည်ဆောက်မှုများကိုကြိုးစားခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ ၎င်းသည် XFCE ထက် ပို၍ အရည်ပျော်ပြီး၎င်းသည် ပို၍ လှပသည်။ ကျွန်တော်မကြိုက်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာမူလအဖွဲ့သည်၎င်းကိုတည်ဆောက်နေသည့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကင်းမဲ့ခြင်းအပြင်ရက်စွဲများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်သည်။ ဤပြproblemsနာများအားလုံးနှင့်တောင်မှငါကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတ ဦး တည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါဟာအရမ်းပေါ့ပြီးလှပတယ်၊ ဒါကိုငါကြိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင် applications များလှပသောဖြစ်ကြပြီးကသေး beta ကိုမဖြစ်ဖို့အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။ ငါထွက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အရာရာတိုင်းကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ရန်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် Linux သုံးစွဲသူများမကြိုက်သော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်သည်။ Elementary စီမံချက်သည်စိတ်တွင်ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိပြီးဒီဇိုင်းသည်သူတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပျဉ်ပြားအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် (သူတို့လက်ရှိဗားရှင်းတွင်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း)
ယခုခေတ်အဓိက Linux distros (စီးပွားဖြစ် + debian) သည် Xfce, Lxde သို့မဟုတ် Razor-qt ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောနှင့်အနည်းဆုံးသောဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို (အနိမ့်ဆုံးဂရပ်ဖစ်ဘုံပိုင်းခြေ) အဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ )
distro တွင်အခြားပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသော်ငြား (RH-Fedora GnomeShell, OpenSuse KDE SC, Ubuntu Unity စသည်)
- အနိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု၊ အထုပ်များ၊ iso ရှိနေရာ၊ အမြင်ဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှု၊ ...
- နိမ့်သောစနစ်လိုအပ်ချက်များ (အစွန်းရောက်ခြင်းမရှိဘဲ) နှင့်ကျယ်ပြန့်ဟာ့ဒ်ဝဲသဟဇာတ။
စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လက်စွဲများဖန်တီးရန်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဇာတ်ညွှန်းများဖန်တီးရန်လွယ်ကူစေရန် (ဥပမာ - တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်မဟုတ်သောအသုံးပြုသူများအတွက်လက်စွဲနှင့်သင်တန်းများ)
login ၀ င်သည့်အချိန်တွင်ဤကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုသည် Linux တွင်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်ကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ graphical enviroments များသည် gnome-fallback ကဲ့သို့သောအရာများနှင့် ၀ န်ထုပ် ၀ င်းပရန်၊ အမြတ်အစွန်းအရင်းအမြစ်များကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်မလိုဟုငါထင်သည်။
Riven taker ဟုသူကပြောသည်
Gnome2သင်ကြာရှည်စွာနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကကောင်းသောဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ Xfce ရေရှည်တွင် "သူတို့နိုးလာပါက" ဖြေးဖြေးသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် Mate အတွက်မဟုတ်ပါ (ကောင်းမွန်သောလမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်ပါ) သို့မဟုတ် Cinnamon ...
Gnome ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် version3ကိုခုန်ကူးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ KDE4 ကတခြားရွေးချယ်စရာတွေရှာတော့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ကွန်ပြူတာကအဲဒါကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရင်းအမြစ်တွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိလို့အခုလက်ရှိ Openbox မှာရှိနေတယ်။ ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်လိုအပ်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုပေးသည်။ တိုတိုပြောရရင်သူတို့ဟာမင်းကအသစ်ပြန်ရမယ်၊ သေရမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် Gnome2မှာငါဘယ်လောက်အထိခံစားခဲ့ရတယ်၊
Riven Taker မှစာပြန်ရန်
Gnome2သည်အလွန်အကျွမ်းတ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သင်ကအရာရာကိုလုပ်နိုင်သည်၊ သင်တက်သည်နှင့်တက်လိုက်၊ အရေးမပါ၊ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေသည်။ သို့သော်သင်ပင်ထိုတွင်မနေနိုင်တော့ပါ (ခေတ်မမီတော့) နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည်အလားအလာရှိသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Centos လိုမျိုးရွေးချယ်စရာသီအိုရီအရ ၂၀၂၀ အထိအထောက်အပံ့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် desktop ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရမ်းခေတ်နောက်ကျနေပါတယ်။ XP မှာဆက်နေဖို့ကြိုးစားနေသလိုမျိုးပါ ထောက်ခံမှုရပ်တန့်လျှင်, ကံမကောင်း "သေပြီ" သမျှ 2020 (ငါဖတ်ပြီးသကဲ့သို့) အနိုင်ရထက်သာ။ ကောင်း၏။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး linux မှတ်ဉာဏ်က gnome2 ပါ။ panel နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အံ့သြမိပါတယ်။ hahahaha, gnome2 စတင်တဲ့အချိန်မှာငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်မှာငါ xfce ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​မင်းပြောတာကသူတို့နိုးရင်သူတို့ကအကောင်းဆုံးလို့အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ် kux3 သည်တားမြစ်ထားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ပထမအဆင့် hardware ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ~ _ ~ လတ်တလောကျွန်ုပ်၏ desktop PC ၌ကျွန်ုပ်တွင် xfce ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ laptop ပေါ်တွင် openbox ကိုသုံးပါသည် (မကြာသေးမီက) ငါကအဲဒါကိုထူးခြားမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ အရမ်းလှတယ်၊ ဗေဒလို့ပြောနိုင်တယ်၊ အဲဒါကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအချို့ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်ဒီနေ့စည်းလုံးမှုကိုအသုံးမပြုဘူး။ ဒီတော့ ... .. ငါ့အဘို့ xfce နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် ^^
mmmm တားမြစ်ထားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုအတွက် xmm၊ Awesome ကိုငါကြည့်ရှုခဲ့သည်။ netbook အတွက်ဖြစ်သည်။ (ငါမင်းထက်အခြားလမ်း၊ Debian နှင့်အတူ Openbox desktop၊ Arch နှင့်အတူ Xfce netbook နှင့်အတူ) သို့သော်၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောသင်ယူမှုကွေးကြောင်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးသည်အထိသူတို့က Xmonad နှင့် ratpoison ၏ကောင်းစွာပြောပေမယ့် ... ဒါဟာအချိန်ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖိုရမ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု already ပြီးသားဖြစ်သည်
gnome gnome2နှင့်အတူသေဆုံးခဲ့ပါသည်
gnome3ကိုအခြားအရာတစ်ခုဟုခေါ်သင့်သည်၊
nonamed မှ reply
Gnome3Shell ကို "TheDeskBenown KnownAsGnome" ဟုခေါ်တွင်စေသင့်သည်။
အခုငါ mint 13 mate edition ကိုထွက်နေပြီ။ ငါက Ubuntu ကနေထွက်သွားခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တစ်ခုလုံးဟာစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ (gnome) နဲ့တိုက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့အရာရာတိုင်းချောချောမွေ့မွေ့နဲ့မျက်နှာပြင်အေးခဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငါပြန်သွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ သူတို့ Desktop ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါ (unity ရော၊
ငါ့မှာ Nvidia ရှိတယ်။ အရှိန်မြှင့်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်သူကပိုပြီးပွတ် 2D session တစ်ခုရှိသည့်အခါသစ်ကြံပိုးခေါက်ပြောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည် Debian Wheezy တွင် Gnome Fallback ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Gnome 3.4 (Nautilus ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါ) ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းကိုပြောင်းသောအခါကျွန်ုပ်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်အရာများကြာမှသာစိတ်သက်သာရာရနိုင်သည်။
gnome3 ထွက်လာကတည်းကပိုများလာသည်။ ငါကဒါကိုစုပ်ယူသည်၊ ဝမ်းနည်းစရာမှာ၎င်းတို့ကိုပိုမိုအရှိန်မြှင့်လိုက်တိုင်း = (
ငါရိုးရိုးသားသားပြောရရင် GNOME Shell ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ Ubuntu တွင်စမ်းသပ်ရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီး fallback ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောကြောင့် fallback ကိုစွန့ ်၍ shell ကိုဖယ်လိုက်သည်။ တကယ်လို့မရှိတော့ရင်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Unity နဲ့အတူရှိနေမှာပါ။ အနည်းဆုံး Unity မှာ sidebar ကိုဖျောက်နိုင်ပြီး HUD ကို "alt" ခလုတ်ဖြင့်သာသုံးပါ၊ သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သာ browser ကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်က GNOME Shell ထက်ပိုမြန်သည် (အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်) ဗားရှင်း) ။ ကျွန်တော့်မျက်စိကိုဖမ်းမိသော GNOME ကျောရိုးနှင့်စည်းလုံးမှုအပြင်ဘက်တွင်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုမှာ MATE ဖြစ်သည်။ KDE ကိုငါမကြိုက်ဘူး (အရမ်းနှေးတယ်၊ gelatinous jellyfish နဲ့တူတဲ့ desktop ပေါ်ကခလုတ်တွေကမကူညီဘူး); lxde နှင့် xcfe အရမ်းမြန်ပြီးရိုးရှင်းပေမယ့်ကျွန်တော့်အရသာထဲမှာမပါဘူး ငါမသိဘူး၊ GNOME ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာပဲ။
သူတို့ကဘာကြောင့် gnome-shell နှင့် unity ကိုဘာကြောင့်ဝေဖန်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ တိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ ပုံမှန် menu ထဲကနေမနေနိုင်တော့ဘူး၊ အဆင်ပြေတယ်၊ ​​ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သုံးစွဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သုံးပေမယ့်တချို့အသုံးပြုသူတွေကြည့်ချင်တဲ့အလှတရားတော့မရှိဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်အတွက် gnome-shell (ရိုးရှင်းသော၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း) ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Linux တွင်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြဲတမ်းအတူတူပါပဲ
အဓိကအချက်မှာ desktop ဥပစာစကားကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည် ပတ် ၀ န်းကျင်များသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးအောင်မြင်မှုများနှင့်အမှားအယွင်းများအမြဲရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း GNU / Linux ကဲ့သို့သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ အမှန်တရားလည်းရှိပါသေးသည်။ Mate သည် Gnome2ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ Cinnamon သည် Gnome2၏ကောင်းကျိုးများနှင့် Gnome3၏အားသာချက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်ရရှိထားသည့်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Gnome Shell သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် KnE Shell ကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းသည်။ သောအလွန်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးလူစုခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လူကြိုက်များမှုကိုထောက်ခံသည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါစေ၊ အချို့သူများရှိသည့် "EVOLVING THE FUCK" ဟူသောအယူအဆကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှနားမလည်ပါ။
Ubuntu Unity နဲ့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကောင်းပါတယ်၊ Gnome shell နှင့် gnome2bar နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အထူးကောင်းမွန်သည် (အထူးသဖြင့် notifiers ကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)၊ သို့သော်၎င်းသည်သူ့ဟာသူထက် ပို၍ လေးလံ။ အယောင်ဆောင်။ ဖြစ်စေသည် Gnome shell ကို ... ..and ပြီးတော့ဖယ်ရှားမရနိုငျသောဘေးထွက် bar ကိုနောက်ဆုံးကောက်ရိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Elementary ပေါ်လာပြီး Unity တိုးတက်လာသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် Ubuntu-based distro တစ်ခုဖြစ်ရန်မည်သည့် distro တွင်မဆိုအသုံးပြုရန်အတွက်အခမဲ့ desktop အဖြစ်ဖွင့်ခြင်းထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုသည်။ (Ubuntu 13.04 ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီး 12.04 xD အပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏ဗားရှင်းကိုမထုတ်ပေးသေးပါ)
ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်သွားလျှင် Gnome သည်ယခုအချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုကျွန်ုပ်ခံစားရသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်၎င်းသည် workbar ကိုအရင်ကဲ့သို့ကိုင်တွယ်ရန်မလိုတော့လျှင် extensions များကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အချိန်ပိုဖြုန်းခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းနဲ့လုံးဝသဘောတူတယ် ငါ KDE မှလာသည်။ Gnome Shell ကိုကြိုးစားပြီးနောက် Gnome ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါတို့ဟာဆန်းသစ်တီထွင်ဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကိုဂန္ထဝင်စားပွဲခုံနဲ့မကုန်နိုင်ဘူး အပြောင်းအလဲကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လက်ခံဖို့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့လူတချို့ကိုငါနားမလည်ဘူး။
အဘယ်အရာကိုစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ပါဘူး? ကောင်းပြီ၊ ဒါက polishing ပစ္စည်းတွေမရှိတာအမှန်ပဲ၊ အခုသင် Gnome နဲ့အများကြီးလုပ်နိုင်တယ် သင်မည်သည့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်ကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် Gnome Shell ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်အတော်လေးအနည်းငယ်ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည်။
မင်းအကြောင်းကိုမင်းမသိဘူးဒါပေမယ့်ငါဒီမှာပုံသဏ္seeာန်တစ်စုံတစ်ရာကိုတွေ့ပြီ၊ ငါဒါမှားတယ်လို့မပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသဘောကျတာကတော့အရာရာသွားပုံကိုမနှစ်သက်ဘူး။ Pentium4 နဲ့အံ့သြစရာတွေကိုလုပ်နိုင်မယ့်အချိန်တွေဘယ်မှာလဲ။ 3.8 GHz နဲ့ငါ့2GB RAM?, installing 6.0 ဖြစ်ရတဲ့ Times ဟာအံ့ was စရာကောင်းတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Ubutu 10 ကကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးပေါ့။ အဲလိုမျိုး shell နဲ့ OS ရဲ့လည်ပတ်မှုအတွက်ငါ့ဗိသုကာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်မပူပါနဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကပြောခဲ့တာကအခုကျွန်တော်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျပြီးထိရောက်တဲ့ Shell ဒါမှမဟုတ်ငါ့မှာရှိခဲ့တဲ့မျိုးဆက်သစ်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ရင်၊ ငါဟာဂရပ်ဖစ်အရှိန်မြှင့်တဲ့ကွန်ပျူတာရှိဖို့လိုတယ်၊ ငါ Windows သုံးနေတယ်ဆိုတာသိချင်နေပြီလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ WinXP အသုံးပြုသူများသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တည်ငြိမ်သည်။ ၇ နှစ် Vista ကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးသူတို့ဟာအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ သို့သော် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က Win2 တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာ၊ ၎င်းသည်သင်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ဗိသုကာပညာကိုလုံးဝပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကွန်ပျူတာအသစ်တစ်ခုဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်မရှိတော့သောသင်ကကျယ်ပြန့်မှုကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သင်၏ကွန်ပျူတာစက်ကိရိယာကိုနည်းပညာတိုးတက်မှုသို့မွမ်းမံခြင်းသည်မှားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် Deian, Mint, Ubuntu, Fedora, စသည်တို့ကိုပြက်ရယ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Gnome, KDE, XFE, Mate, Cinnamon စသည်တို့သည်လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်များဖြင့်မည်သည့်လျောက်ပတ်သောသို့မဟုတ်သာမာန်လျောက်ပတ်သောဗိသုကာကပံ့ပိုးပေးသည်၊
Pentium 4? လာပါ၊ ဤအချိန်တွင် GShell သို့မဟုတ် KDE, MATE, CInnamon စသည်တို့လုပ်ဆောင်ရန်ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မြှင့်ခြင်းများပါ ၀ င်သည့် Atom ပရိုဆက်ဆာများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုအစမှမဆောက်လုပ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် 4GB RAM ပါသော P4 တစ်ခုရှိသည် (၎င်းသည်အများဆုံးကိုင်နိုင်သည်)၊ XFCE နှင့်အတူအရာအားလုံးအတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။
လူသား !!! လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က၎င်းတို့သည်တူညီသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောဆိုခဲ့ကြသော်လည်း၊ သူတို့နှစ်နှစ်လောက်စျေးကွက်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေသော pentium 10 အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ pentium (၁) အကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
လက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှစ၍ hardware နှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်မှာကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုရပ်တန့်စေချင်တော့ပါ။
XFCE ကို GTK3 သို့ပြောင်းရန် GTKXNUMX desktop desktop ဖြစ်လာရန်တိုက်တွန်းထားသည်။
မင်္ဂလာပါ iBuntu 12.04 ကိုလက်ရှိသုံးနေပြီး gnome gnome fallback ကိုသုံးရပါတယ်
၂။ desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုများလေ၊ အရင်းအမြစ်များပိုမိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာများကို ထပ်မံ၍ တီထွင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်
အဆိုပါပြproblemနာကိုသူတို့ထိုသို့ပြုလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Unity and Gnome Shell သည်ထိုရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်နေပြီး KDE သည်လည်းအတူတူဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပထမနှစ်ခုသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မူကွဲမရှိပါ။
KDE တွင် Desktop option, Netbook option နှင့်ထိပ်ဆုံးမှ Tablets option ရှိသည်။ သူတို့က ၃ ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာထိန်းသိမ်းထားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောအာနိသင်ရှိသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအရသာသုံးမျိုးရရှိစေသည်။
အကယ်၍ Gnome ကထိုသို့လုပ်ခဲ့လျှင် Desktop အသုံးပြုသူများသည်စွန့်ပစ်ခံရသည်ဟုခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့သူတို့သည်ယနေ့တွင်ပိုမိုအောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ငါ gnome shell ကိုပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါထည့်သွင်းစဉ်းစားငါ fedora 15 ၏ဗားရှင်းအတွက်သာကစတင်ခဲ့သည်ကြောင့်အမှန်တကယ် shit ခဲ့ပေမယ့်အခုအချိန်မှာဒါဟာသိပ်အဆင့်မြင့်မဟုတ်ပေမယ့်အချို့ရှုထောင့်များတွင်အများကြီးတိုးတက်လာပေမယ့်တစ် ဦး အတွက် အချို့သောနည်းလမ်းများမှာ Gnome သည်အလွန်ကောင်းသောအခမဲ့ desktop ဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော KDE နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် fedora 17 ပေါ်တွင် gnome 3.4 နှင့်အတူငါလာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမှာပြတင်းပေါက်တွေနဲ့မုန်တိုင်းထန်နေတဲ့အတိတ်ကိုပြန်သတိမပေးတဲ့ desktop တစ်ခုရှိချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါပြောတာကတော့ငါ gnome2ကိုလည်းလွမ်းတယ်၊ ဒါကစစ်မှန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအစားထိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ gnome 2, ဒါကြောင့်မကြာခင်ငါ gnome shell ကိုကြိုက်တယ်နှင့်ငါ့အခြား Kubuntu partition ကိုအတူအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်
Gnome2အမှိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နှင့်လည်း KDE ။
နှင့် Windows, ၎င်း၏အားလုံးဗားရှင်း၌တည်၏။
ထို့အပြင် Gnome3သို့မဟုတ် Unity သည်ယခင်များထက်အမှိုက်သရိုက်များနည်းပါးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းခုံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် desktop ကိုဖြတ်ပြီး၎င်း၏အားနည်းချက်များကိုအသုံးချရန်လေ့လာသင်ယူခဲ့ခြင်းက desktop သည် "အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်" ဟုမဆိုလိုပါ။ သူတို့ကိုဖတ်လိုသူမည်သူမဆိုအဘို့, ဒီဇိုင်နာများ Gnome2ကိုအလွန်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရသည့်အကြောင်းရင်းများသည်အများပြည်သူအတွက်ဖြစ်သည်။ (သန်းပေါင်းများစွာသောအနတ္တသဘောတရားများ၊ အဆက်မပြတ်အာရုံပျံ့လွင့်မှုများနှင့်ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုများ၊ ကိုက်ညီမှုမရှိသောအပြုအမူများကို) ရောထွေးစေသောအသိပေးချက်areaရိယာနှင့်သူတို့ကိုငါလုံးဝသံသယမရှိ၊ နောက်တစ်ခုကသူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
သာမန်လူများဟာသူတို့ရဲ့ Hard-Learning လှည့်ကွက်များအလုပ်မလုပ်တော့သောကြောင့်စားပွဲခွင်များပြောင်းမည်ကိုကြောက်လန့်သောအခါစားပွဲခုံသည်အစ မှစတင်၍ ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ သင်သတိပေးချက်များပြissueနာနှင့်သင့်လျော်သည်။ ယခုတွင်အလွန်အောင်မြင်သောအရာများရှိသေးသည်။ သို့သော်အခြားသူများကမလိုက်နာနိုင်သည့်အရာများမှာ gnome-.shell ရှိသည့် application များနှင့် null customization ကိုပြသရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမန်အသုံးပြုသူဟုမှတ်ယူပြီးစားပွဲခုံများကိုကြောက်စရာမလိုပါ။ သူတို့ကိုငါစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ Gnome2 ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ငါပြောတယ်၊ ငါလက်ရှိ XFCE ကိုသုံးတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါ GNOME Shell ကိုကြိုက်တယ်၊ ၃.၆ ကိုမကြာခင်စမ်းရမယ်ဒါမှမဟုတ် Fedora 3.6 with နဲ့သုံးမယ်
ငါ Gnome Shell နဲ့ Unity ကိုမုန်းတယ်။ Ubuntu ကိုငါမစွန့်ခွာဘူး။ သူတို့ Unity ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Gnome Fallback ကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးလို့ငါထင်နေတယ်။
ထို့အပြင်ငါ Gnome Classic ၏ပုံပန်းသဏ္continueာန်ကိုဆက်လက်လေ့လာပြီး Xubuntu တွင်ရှိနေသည်၊ ambiance ကိုတပ်ဆင်ပြီး၎င်းကို Ubuntu ဟုဆိုသူမည်သူမဆိုပြောလိမ့်မည်။
Rubén, güမဖြစ်ဘူး… Ubuntu က Gnome Fallback ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့မင်းထင်တယ်။
အချို့သူများအတွက်အလွန်လေးလံသောသင်ခန်းစာသည်ပြတင်းပေါက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုပုံစံများနှင့်၎င်း၏ menu menu၊ taskbar နှင့်ပြတင်းပေါက်များစာရင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ယခု gnome နှင့် canonical တို့မှလူများသည်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ဆက်လက်အားထုတ်နေသည့်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ပြတင်းပေါက်များ။ အင်အားနည်းသောစက်ပေါ်တွင် OS လိုအပ်သောသူများအတွက် lxde, xfce နှင့် window manager များရှိသည်။ gnome ၏ရည်မှန်းချက်သည်အလွန် Ultra-customableable desktop ဖြစ်ရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်၊ kde ကိုဂရုစိုက်သည်။ GNU / linux တွင်အဆိုပြုချက်မရှိခြင်းကိုလူအများကဝေဖန်ကြသည်။ ယခုတွင်၎င်းတို့သည်အရာအားလုံးကိုယခင်ကဲ့သို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ရှိနေသည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်တစ်ခုမှာအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်အခြားတစ်ခုသည်စာသားအခြေခံဖြစ်သော xxce သို့သွားရန်နှင့်၎င်းသည်ဘာမှမထူးခြားသောကြောင့်လျစ်လျူရှုမှုဖြစ်စေသော lxde ကိုသွားရန်ဖြစ်သည်။
ငါ XFCE ဟာအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ MATE ကိုကြိုးစားပြီး၊ gnome2မှကူးယူပြီးအလွန်ကောင်းတယ်၊ gnome shell ကိုအခုငါကြိုက်တာကအိမ်ထောင်ဖက်မှာငါ gnome2နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်၊ ငါကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့် gnome2ကိုသင်ကြိုက်လျှင် mate သည်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်အခြားအမည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
သူတို့ဟာသူတို့တီထွင်ချင်တာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောရတယ်။ ခဏကြာတော့သူတို့ Unity ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်၊ ငါ (တခြားကွန်ပျူတာနဲ့လည်း Ubuntu) ကိုပြန်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့… Ubuntu ဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်းငါ install လုပ်ပြီးစမ်းလိုက်တယ်။ အနည်းဆုံးရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာပေမယ့် Ubuntu ထက်အများကြီးပိုမြန်တဲ့အတွက် Xubuntu ကိုအမြဲတမ်းပြန်သွားခဲ့တယ်။ ဒါဟာသင်ယူခြင်းအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာ Ubuntu နဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။
"fallback mode" ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဂန္တ ၀ င် GNOME session မရှိတော့ဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်အချို့သော GNOME modules များပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ဥပမာ - metacity, gnome-panel, gnome-applets, notification-daemon, gnome-screensaver, polkit-gnome နှင့် nm-applet »
သင်၏ Unity ကိုရှင်သန်စေရန် Canonical အသုံးပြုသမျှမှာအတိအကျဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ Canonical သည်၎င်း၏ OWN desktop environment ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် Gnome မှချေးထားသောကိရိယာများကိုရပ်တန့်ရန်တကယ်ပင်ရည်ရွယ်သည်ဆိုပါက၎င်းတို့အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကောင်းသည်။
Gnome ဟာ RetHat ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစံနှုန်းကိုက်အောင်လုပ်နေကြတာပါ။ Gnome ဟာပုံမှန် Gnome OS ဖြစ်လာဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှသူတို့ရဲ့ tools တွေဒါမှမဟုတ် modules တွေကိုသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကမ္ဘာမှာလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ Gnome ကနေဘာမှအသုံးမပြုဘဲ Canonical ကသူ့ကိုကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ငါက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် tools များနှင့် module တွေနှင့်အတူ Unity ကိုမြင်ချင်ပါတယ်မှာအားလုံး Gnome အပေါ်မူတည်မဟုတ်ပါဘူး။
RedHad နှင့် Canonical တို့သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌ရှိသောအရာများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Linux လောကတွင်လုံလောက်မှုမရှိဟုညည်းညူနေသောကြောင့်၊ Gnome ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကို RedHad မှကမကထပြုပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထိန်းသိမ်းထားသော distro တစ်ခုသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများ (gnome များ) ကို အသုံးပြု၍ လူကြိုက်များလာသည်မှာရယ်စရာမဟုတ်ပါ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် Canonical သည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေပြီး Unity မှအခြားမည်သူကိုမျှအကျိုးမပြုစေလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းမှအကျိုးရှိသည် အခြားစီမံကိန်းများ၊ မည်သည့်ထပ်မံသွားစရာမလိုဘဲ Gnome ။ ဆောင်းရာသီရောက်သောအခါ Canonical နှင့်၎င်း၏ Unity သတင်းများမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုကြည့်။ ကွန်ပျူတာနှင့်ဝေးရာသို့မရွေ့ဘဲပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နှင့်ကိုကာကိုလာကိုပြင်ဆင်မည်။ ATI နှင့် Nvidia တို့ကသူတို့၏ထိန်းချုပ်သူများ၏အရည်အသွေးနှင့်မည်သို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ကိုကြည့်ကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာ Samsung-Apple ကိစ္စကိုပြက်လုံးတွေ၊
ပထမ ဦး စွာ (Linux ကို Ubuntu 10.04 ဖြင့်စတင်ခြင်း) အကယ်၍ Gnome သည်ဤအခြေအနေသို့ရောက်ရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် KDE ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Linux ခေါင်းစဉ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန် Gnome နှင့်အတူဖိုရမ်များကိုလမ်းပြခဲ့သည်။ vs KDE "နှင့် Gnome သည်များသောအားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာအများစုသည် GTK အတွက်ပြုလုပ်သောကြောင့်ယခုရွှေ့ပြောင်းရန်မလွယ်ကူပါ။
Canonical က "သူတို့ကိုစည်းလုံးမှုကနေအကျိုးမပေးစေချင်ဘူး" ဆိုတဲ့ကျွန်တော့်အတွက်ရယ်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လောက်ရယ်စရာကောင်းလိုက်မလဲ။ အဲဒီလိုပြောဖို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ထိုသူတို့အဘယ်အကျိုးကျေးဇူးများလိမ့်မလဲ
ဆိုလိုသည်မှာ Unity ကို Ubuntu နှင့်၎င်းပေါ်တွင်အခြေခံထားသော distros များပေါ်တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီအမှားအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ယခုအချိန်တွင်ငါ ubuntu နှင့်မသက်ဆိုင်သောနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုအောက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လွတ်လပ်သော distro ငါမသိရပါဘူး။ အခြား tools တွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောရင်၊ Gnome desktop environment ကိုဆိုလိုတာ။ "jamin-samuel" ကအပေါ်ကအကြောင်းပြပြီးပြီ
»…အချို့သော GNOME modules များပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ဥပမာ - metacity, gnome-panel, gnome-applets, notification-daemon, gnome-screensaver, polkit-gnome နှင့် nm-applet”
၎င်းသည်၎င်း၏စည်းလုံးမှုကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်အတွက် Canonical အသုံးပြုသမျှမှာအတိအကျဖြစ်သည်။
Ubuntu ၏ပြင်ပရှိ Unity ကို Unity မသုံးပါက၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်သူမျှအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောအခြေအနေများစွာရှိသည်။
Canonical သည် Unity ကိုမျှဝေလိုခြင်းမရှိခြင်းသည်လူတို့၏မသိနားမလည်မှုကြောင့်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါ link သည် Arch Linux တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
Ubuntu ပြင်ပမှာ Unity ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်အောင်ကြိုးစားဖို့ Debian, Fedora, openSUSE, ... လုပ်သူတွေရှိတယ်။
ကောက်ကြောင်း ၂၃ ဟုသူကပြောသည်
ကြီးမားတဲ့တစ်ခုထွက်နေပြီဆိုတော့ Openbox မှာသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်
ငါတို့စည်းလုံးလျှင် Debian သည် Gnome Shell သို့ပြန်သွားသည်။ ဒါကြောင့်တော့ဘူးဒီတော့မကောင်းတဲ့မကြည့်စေခြင်းငှါ, Gnome တွင်အနာဂတ်များစွာရှိသော်လည်းပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေဆဲ ဖြစ်၍ အရာ ၀ တ္ထုများပျောက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ထူးခြားတဲ့ဗေဒနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုအောင်မြင်ရန်ခြေလှမ်းများနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်းပေးသောအပလီကေးရှင်းများသည်အောင်မြင်မှုရှိပြီးအားလုံးသည်တူညီသောပေါင်းစပ်မှုပုံစံဖြင့် (ဥပမာအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များသည်အပိုဆော့ဖ်ဝဲမပါဘဲဖတ်နိုင်ပြီးကျန်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့ပင်စီမံနိုင်သည်) ။ KDE သည်ပိုမိုရှည်လျားပြီးပိုမိုရင့်ကျက်ပြီး touch devices များနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါရွေးချယ်စရာများပိုမိုပေးသည်။ အနာဂတ်ကွန်ပျူတာ (ကွန်ပျူတာပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်မပြောပါ) …။ သို့သော် Gnome သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော universal interface ဖြင့်ရှာဖွေသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လွန်းနှေးကွေးသော်လည်း ... ကအောင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Gnome2ကိုကြိုက်ခဲ့လို့ပါ။ လမ်းဆုံလမ်းခွမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် KDE ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်ဟုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေသည်။ Gnome2နှင့်ဆင်တူသောအာရုံခံစားမှုများကိုရှာဖွေရန်လမ်းကြောင်းအသစ်များဤမျှလောက်များများမဖွင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်စေသည် ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားသောစားပွဲခုံများနှင့်အမှန်တကယ်အတူတူပင်ပိုများမှာ, ဒါပေမယ့်ပိုဆိုးသောသူတို့အားအနကျအဓိပ်ပါယျရှိသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မနေတဲ့ဘဝမှာဘဝဟာ Ubuntu ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပဲ။ Unity မြည်းကနေဆင်းမရတော့ဘူး။ Ubuntu သည်အမြဲတမ်းလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးသောဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Debian ၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည် (ဥပမာ Canonical တွင်ပြုလုပ်သောအပြောင်းအလဲများမရှိခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်သတင်းအရင်းအမြစ်များသည်ကြည့်ကောင်းသည်) ။ Fedora ကကျွန်တော့်ကိုသိပ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Ubuntu Gnome Shell (သို့မဟုတ် gUbuntu) နဲ့ Gnome ဟာရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးသူ့ distro ကိုဖြန့်ချိဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ (အဲဒီအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အတော်လေးအောင်မြင်ဖို့လိုသည်) ။ ElementaryOS ...... သည်ကျွန်ုပ်အတွက် "တံခါးပိတ်" နေပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏ကောင်းသောအလုပ်နှင့် Gnome Shell ကိုခွဲခြားရန် "ညှိထားသော" ရွေးခြင်းတွင်အောင်မြင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၎င်းသည် Canonical ပြုသင့်သည်။
"ဒါတွေအားလုံးဟာ shit တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သိထားတဲ့အတွက်တခြား Desktop Environments ကိုဥပမာအားဖြင့် Xfce or MATE .. ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်"
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် interface ဟောင်းသည်နိဂုံးချုပ်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် touch PCs အသစ်များ၏သွင်ပြင်ကိုအနည်းငယ်သာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တည်းဖြတ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော interface သည် gnome shell ဖြစ်သည်။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်မှာဤပြောင်းလဲမှုများကိုတိုက်ခိုက်သူများသည်သူတို့၏စိတ်ကိုပိတ်ထားပြီး linux နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လောကတွင်မည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ကိုမသိကြပါ။
Gnome3သည်ဗားရှင်း ၂ နှင့်စပ်လျဉ်း။ တိုးတက်မှုများအကြောင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသောကြောင့်သင်ဤ "interface ဟောင်း" ကိုများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ငါအထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါမှတ်မိသလောက်, လွန်ခဲ့သော5နှစ်ခန့်သည်အထိတစ် ဦး distro run ဖို့စက်မလိုအပ်ခဲ့, ဒါကြောင့်၎င်း၏ "PC များထိရန်ရည်ရွယ်ထားပတ်ဝန်းကျင်မှာအသစ်" နှင့်အတူယနေ့အမှုမဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ကများစွာသောလူမပျော်နှင့် ပြင်ပမှာ။
ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကို "ပိတ်ဆို့ထားခြင်း" ဟုမယူမှတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Mandrake 6.0 (1999) မှစ၍ ဤ Linux Linux တွင်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲ desktop, distros, version များအကြောင်းပြောဆိုနိူင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုမှားနေသည်ဟုထင်ပါသည်။ ။ 😉
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ငါသိချင်တာက Gnome3ဟာသူ့ရဲ့ shell ကို (ကျနော့်အမြင် - ဟုတ်ကဲ့) ဟာအရင်ကထက်အများကြီးပိုပြီးလှပနေပုံရတယ်ဆိုရင်တောင် - gnome-shell designers ကိုလူကြီးလူကောင်းတွေကိုဒီကမ္ဘာထဲသွင်းဖို့မှတ်သားထားတာတောင်မှပါ။ ကျွန်တော်တို့အများစုမှာ touchscreen တွေမရှိဘူး၊ လက်တော့ပ်ဟောင်းတွေ၊ စားပွဲခုံတွေရှိပေမယ့် touchscreen ကွန်ပျူတာအမြောက်အများကိုအခုမရောင်းရသေးလို့ ၀ န်ခံဖို့လွယ်ကူတဲ့အခါ touch interfaces of of interface ထိုကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများကိုဖြုန်းတီးပစ်နိုင်သကဲ့သို့လက်ရှိ input သွင်းကိရိယာများကိုသုံးသူ၊ မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်တို့ကိုပါတားဆီးနိုင်သည်။
သူတို့ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့ကြတာလဲ။ တီထွင်ဆန်းသစ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ လှပသော်ငြားလည်းကောင်းမွန်သောလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
၎င်းသည်တကယ့်ကိုလှပတင့်တယ်ခြင်းမရှိသော်လည်းမူလ Gnome2အသွင်အပြင်ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်အရာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ မိနစ်အနည်းငယ်မှာလှပစေရန်နှင့်လှပသော၊ Gnome3သည်အမြင်အာရုံနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲမှုနည်းပါးသည်။
အကယ်၍ သင်အလိုရှိပါကသင်၏ pentium2နှင့် gnome 1.0 ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတစ်နေ့တွင်သင် gnome 1.0 ကိုပျင်းလာပါကကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အတွက်အသက်ရှင်နေစဉ်သင်၏စက်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည့် windows 98 ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့တောင်မှ၎င်းသည်၎င်း၏ interface ဟောင်းကိုမေ့သွားပြီးကွန်ပျူတာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အချိန်တန်ပြီကိုသတိပြုမိခဲ့သည်
ငါ၌ pentium2မရှိသကဲ့သို့ 98 လည်းအနိုင်ရသည်မဟုတ်။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ် Gnome3နှင့် Unity သို့ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Openbox ကိုသုံးသည်။
ပြီးတော့ "Touch" (ဖတ်ပါ) ခေတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Awesome ကိုစီစဉ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဆက်လက်လေ့လာရန်မှာနောက်ကျလွန်းပြီး၎င်းပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခု၏ဆုတ်ယုတ်မှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ubuntu ဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်းတစ်ပြားတစ်ပြား (ယူရို) သုံးစရာမလိုဘဲထူးချွန်မှုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်ရှိတိုင်းအချိန်တိုင်း၊ GNU / Linux သည်မည်သည့်နေရာတွင်မျှ Windows နှင့်တူညီခြင်းမရှိကြောင်း၊ ဗားရှင်းတိုင်းတွင်အရင်းအမြစ်များမရှိခြင်း၊ နေရာတိုင်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များတိုက်ဖျက်ခြင်းတို့ကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ကိုမေ့လျော့ခဲ့ကြသည့်အခြားသူများကထိုသို့ဖြစ်သည်။ you: သင်သည်နောက်ဆုံးသို့ဖြစ်လျှင်”
သင်ဤအဆင့်ကိုလိုက်နာပါက Ubuntu သည် Windows နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုငါမသုံးသော်လည်း၎င်း၊ အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မျှအသုံးမပြုပါ။ သို့သော် Ubuntu ခေါင်းစဉ်သည်ဖိုရမ်တစ်ခုတွင်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာမဟုတ်ပါ။
@ Windóusico၊ Arch Wiki တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်လျှင်၊ ပြproblemနာသည် Unity ကိုအခြား distros များသို့သယ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြား distros များအသုံးပြုခွင့်ကိုမကျေနပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒီ Gnome ရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုက Unity နဲ့ဘယ်လိုအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာကိုငါတွေ့လိမ့်မယ်။ CrossOver ကမှတ်ပုံတင်တဲ့သူတွေအတွက် ၁ နှစ်အခမဲ့ဗားရှင်းကို Linux သုံးဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်။ အများကြီးပို ... ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခရစ်စမတ်ရှိလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကပွေ့ဖက် xD
စကားမစပ်၊ ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူများကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုပါသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဖြစ်ရပ်များအပြင်၊ တည်းဖြတ်သူများဘက်မှလည်းပုဂ္ဂလဒိive္ဌိဖြစ်ခြင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ ခင်ဗျားရဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာမင်းကိုသဘာဝအတိုင်းဖော်ပြတဲ့နည်းကိုသဘောကျတယ်။ မှတ်ချက်တစ်ခုအတွက်မဲစနစ်ကိုသင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလား။ …»မှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာမဲပေးနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောသူများသည်မဲပေးခွင့်မပြုဘဲမှတ်ချက်ပေးပိုင်ခွင့်သာရှိသည်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောသို့မဟုတ်အလားတူသောအရာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Noooooo !!! gnome fallback မပါဘဲငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြမည်နည်း
ကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေမှာ gnome 2.3 ကိုသုံးသင့်သလား။
Gnome3သည်ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီနှင့်မတူပဲများစွာသွားသင့်သည်။ အဲ့ဒါပြဿနာပဲ။ အကယ်၍ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပါကအသုံးပြုသူများသည်ဖြန့်ချိမှုအသစ်တစ်ခုစီကိုစောင့်မျှော်ပြီးစနစ်ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးကြလိမ့်မည်။ Android နဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာနဲ့တူတယ်။ Gnome Shell သည်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန် မှစ၍ မည်သည့်အရာမျှတိုးတက်မှုမရှိသေးပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလျော့ကျသွားပြီး၎င်း၏ extensions များကိုတူညီသော shell နှင့်မကိုက်ညီစေပါ။ ၎င်းတို့သည်သင်တန်းကိုပြောင်းလဲသင့်ပြီးအထက်တွင်သာမန်အသုံးပြုသူအတွက်ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အမြင်ရှိအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်
အရမ်းဆိုးတာပဲ။ ဒါကြောင့်အခုမိတ်လိုက်တာပေါ့။ ၃၃
Gnome သည်လူတစ် ဦး စီ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ အကယ်၍ ဂန္တ ၀ င်ပုံစံသို့မဟုတ်ဗားရှင်းအသစ်သည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက။
Gnome panel တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် menu သုံးခုရှိသည်။
Applications, Places နှင့် Desktop ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter အကောင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်နာပါ